LibreOffice 6.2.2 biara ihe kariri 50 | Site na Linux
Akwụkwọ Document kwupụtara mwepụta nke nhazi mmezi nke abụọ maka usoro LibreOffice 6.2, dị ugbu a maka nyiwe niile akwadoro.
Ọ bụ ezie na LibreOffice 6.1 ka bụ ụdị akwadoro maka ndị ọrụ novice na nrụnye igweLibreOffice 6.2.2 dị ebe a iji mejuo ndị ọrụ ike na ndị nwere mmasị na-achọ ịnwale ihe kachasị ọhụrụ na ụlọ ọrụ a na-emepe emepe nke ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa ji.
"LibreOffice 6.2.2 na-anọchite ụzọ isi na usoro nke oghere ọrụ ụlọ ọrụ na-emeghe, yana dị ka ndị dị otú ahụ abụghị nke kachasị maka ojiji na ụlọ ọrụ, ebe nkwụsi ike dị mkpa karịa atụmatụ ọhụrụ. Ndị ọrụ chọrọ ụdị nke tozuru etozu nwere ike ibudata LibreOffice 6.1.5 nke gụnyere ọnwa mmezi. " O kwuru banyere Italo Vignoli.
LibreOffice 6.2.2 na-abịa anyị na ngụkọta nke ndozi 55 N'ofe ihe niile dị mkpa, ntọhapụ a na-abịa nanị izu atọ mgbe nke mbụ gasịrị ma chọọ nkwụsi ike n'ọfịs ụlọ ọrụ iji kwadebe ya maka nrụnye ọtụtụ na ndị ọrụ njedebe. Enwere ike nyochaa mgbanwe dị na ụdị a na njikọ a.
Ihe mgbaru ọsọ ọzọ na mmepe mmepe a bụ LibreOffice 6.2.3. mmezi mmezi nke atọ nke ga-abata n'etiti Eprel 2019. A nabatara mmelite anọ ọzọ maka LibreOffice 6.2 ruo na njedebe nke okirikiri ha na Nọvemba 30, 2019.
Maka ugbu a ị nwere ike ibudata LibreOffice 6.2.2 site na njikọ a ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnweela ya arụnyere melite ya site na njikwa njikwa nke nkesa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » LibreOffice 6.2.2 biara ihe kariri iri ise
Linux ikike maka ndị nchịkwa sistemụ na ndị mmepe